Home Wararka Dowladda NN Sida loo kala Been Badan yahay ayaa Farmajo loogu kala...
Dowladda NN Sida loo kala Been Badan yahay ayaa Farmajo loogu kala Dhow yahay.
Mar waiba waxaan maqleynay been joogto ah oo ay isugu faanayaan, isuna jiibinayaa dhammaan madaxda dowladii Dhacday ee Farmajo. Abwaan Somaliyeed ayaa waxaa laga hayaa ‘ Markuu Oday Durbaan Tumo ayuu Inan Ciyaaraa”. Haddii nin kii hormuudka u ahaa Farmajo uu beenta ku raaxeysanayo Allahna uusan uga xishooneyn maxaad ka fileysaa kuwa hormuudka loo yahay ee Dubbe, Odawaa, Beyle, Kheyre iyo Xundubey waa barbarkey ka baxdaa waa Bakeyle Qaleen oo waa yaan laga badin beenta.
Bal akhristow intaan meel fadhiisatid ma tirin kartaa inta jeer ee aad Farmajo been ka maqashay? Ma tirin kartaa inta jeer ee aad Kheyre been ka maqashay? Ma xusuusan kanrtaa inta jeer ee Dubbaha diiqyeerka dinaahiya aad ka been ka maqashay? Ma tirinkartaa inta jeer ee aad Jenerala Odawaa Yusuf Raage, wiilka duulduula ee ay darjadu ku culus tahay ee Taliska Ciidanka Xooga dalka taladiisa kala wareegay Jeneraal dhali kara oo intii uusan dhalan 5 sano ka hor Jenen ahaa aad ka maqashay ma jiro ciidan loo diray Erateriya. Wuxuu yiri ma ogi hadduusan ogeyn waa masuuliyad darro, hadduu ogyahay ee uu barlamaanka ka qariyey waa dembi.
Intuba waxay sheegaan been tira beel oo ma jirto xaalad dhacday oo aysan dowladda NN been ka sheegin ama aysan shacbiga marin habaabin. Sida xaqiiqdu tahay dal been laguma wadi karo waana dhibka hadda na haysta oo xataa Caruurteenna ayaa xaabo dagaal dalal kale looga dhigay, welina aan la’anahay halkii ay ku dambeeyeen.
Xogaha wareersan ee la helayo ayaa maalinba war duwan noo sheegaya. Madaxda NN ayaa maalin walba TV-yada la taagan warar is burriya oo is beeneyna. Ilahan Cumar oo ka tirsan kongreska Mareykanka oo su’aalo weydiineysay Sarkaal sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ka soo saartay in Caruurteenna xaabo looga dhigay Dagaalka Tigray. Dowladeenna way noo sheegi la’adahay.
Runtii marka wiil aad ku soo tiir iyo Tacab beeshay oo jooga goortii aad ku nasan lahayd intuu u hinqado inuu dalkiisa difaaco dal kale oo aan diin iyo dalba wadaagin xaabo looga dhigo waa xanuun wadnaha kaaga taagan waxaana jeclaan lahayd maalin uu inuu ku soo hor istaago ama kii xaabada ka dhigay hilibkiisa tiirka toogashada sharciga ah lagu waro si hooyo ama aabbe dambe uusan u gablaminin.
Bal dhageyso sida jeesjeeska le ee ay Dubbe iyo Odawaa isugu jawaabayaan iyagoon aysan ka muuqan wax naxariis ah ama calool xumo ah.Walle Farmajow waddaniyad kaa dheeg oo kaama rumeysanno been kale iyo Xelli kale.
Waxaad ka haleysaa Ilhan Cumar oo su’aalo weydiineysa Sarkaalka meelaha dhexa ee 2:37 ilaa 2:40 inta u dhaxeysa. Wareysiga aad ayuu dheer yahay.
Previous article[Faah Faahin] Wararkii ugu danbeeyay qaraxii Muqdisho ka dhacay
Next articleFarmaajo oo u ololeeynaya in uu soo saarto gudoomiyha G. Doorashada Federaalka
Xildhibaanada aqalka sare ee Koofur Galbeed oo war ka soo saaray...
Soomaaliland oo war culus kasoo saartay Hadal kasoo yeeray Madaxweyne Deni...